Akụkọ - Kedu ka esi esi tinye igwe na igwe ọrụ?
Kedu otu esi eji igwe na igwe igwe?
Nhazi eri na machining center bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ngwa. N'ime usoro nhazi eri, ogo na arụmọrụ nke igwe ahụ na-emetụta ogo na arụmọrụ nke akụkụ ahụ. N'okpuru, anyị ga-ewebata usoro nhazi usoro eri nke a na-ejikarị eme ihe n'ezie, yana nhọpụta nke ihe eji arụ ọrụ eri, mmemme NC na nyocha na nkọwa nke nlezianya. Ya mere na onye ọrụ nwere ike ịhọrọ usoro nhazi kwesịrị ekwesị iji melite arụmọrụ nke etiti igwe.
A.Flexible tapping na isiike na ịme ọpịpị tụnyere
N’ebe a na - ahụ maka igwe, ịpị akapịrị ọnụ bụ usoro nhazi a na - ahụkarị, ma ọ dabara adaba maka oghere ndị nwere eriri na obere oghere na oghere dị ala. Ọ nwere ịpị na-agbanwe na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na ụzọ abụọ.
Ngbanwe na-agbanwe agbanwe, a na-ejikọ ọkpọ ahụ site na ntanye na-agbanwe agbanwe, yana enwere ike ịkwụ ụgwọ axially iji kwụghachi njehie nri nke nri axial nke akụrụngwa igwe na ọsọ na-agba ọsọ, wee hụ ọkwa ziri ezi. Mgbanwe na-agbanwe agbanwe nwere njirimara nke usoro mgbagwoju anya, ụgwọ dị elu na mmebi dị mfe. Isiike na ịme ọpịpị, tumadi iji a isiike spring isi jide tap, na spindle ndepụta na spindle ọsọ na-agbanwe agbanwe na igwe ngwá ọrụ, Ọdịdị bụ dịtụ mfe, price bụ dịtụ ọnụ ala, na ngwa bụ wider, nke nwere ike n'ụzọ dị irè belata ndị ọrụ na-eri.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, arụmọrụ nke ụlọ ọrụ igwe na-eji nwayọọ nwayọọ dịwanye mma, ọrụ nkedo siri ike aghọwo nhazi nhazi nke ebe a na-arụ ọrụ, nke bụ ụzọ bụ isi nke nhazi eri.
B.Slection nke taps na nhazi nke threaded ala oghere
Ekwesiri ịhọrọ taps dị ka ihe eji arụ ọrụ. Dabere na ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ngwa ọrụ rụpụtara, a ga-enwe ụdị mgbata kwekọrọ. Nke abuo, kpachara anya na ọdịiche dị n'etiti mgbata-na oghere na-ekpuchi oghere, na njedebe na-eduga nke oghere ahụ dị ogologo. Ihe omimi nke nhazi eri enweghi ike ijide n'aka, ma oburu na ejiri onu uzo kpuchie uzo.
A.Thread egwe ọka atụmatụ
Ngwunye eri pụtara iji eri egwe ọka ndị na-egbutu ya na ighe eri ahụ. Uru nke ihe na-egwe ọka na-emetụ na taps bụ na ha nwere ike nweta mgbapụ mgbapụ na obi jụrụ, na-ezere nsogbu dị mma dịka nha nha na ọgba aghara na usoro ịme ọpịpị. N'otu oge ahụ, mgbe dayameta nke eri ahụ buru ibu, a na-eji ọkpọ ahụ arụ ọrụ, na ike spindle nke akụrụngwa akụrụngwa enweghị ike izute ihe nhazi chọrọ. Site na igwe ịkụ egwu, arụmọrụ nhazi nke eri ahụ dị ntakịrị, ike ọrụ nke onye ọrụ ahụ buru ibu. Usoro ihe eji eri ihe nwere ike imata njirimara nke obere ike na mwepụ nke ọma, ma nwee uru nke nkenke nhazi usoro dị elu na obere oke ike.
B. principlekpụrụ nke eri milling
a. Nhazi igwe na-egwe ọka
N'oge nhazi nke isi cylinder ahụ, enwere ọtụtụ oghere na-agwụ ike n'akụkụ. N'oge gara aga, a na-agbanye mgbata nke mgbatị ahụ, na-ebute ike ọrụ dị elu, arụmọrụ arụmọrụ dị ala, nsogbu dị mma dị ka nha nha ezé, na ngwa ngwa. Iji meziwanye usoro nhazi nke eri ahụ, a na-eji ngwa ọrụ ọhụụ nwere ọtụtụ ezé na-egweri ihe eji arụ ọrụ, a na-ejikwa ebe a na-arụ ọrụ maka nhazi.
b. Eriri na-egwe ọka ọtụtụ-ezé-egwe ọka
Dabere na nnwale ahụ, ogologo dị irè nke multi-nha nha egwe ọka na-ebu ibu karịa nke ogologo eriri nke eriri oghere, na usoro egwu nke ngwaọrụ a ka. Usoro a na-eme ka o doo anya na ezé ọ bụla dị ire na multi-blade thread milling cutter na-ekere òkè na ịkpụ n'otu oge ahụ, si otú a mezue usoro eri niile ngwa ngwa.